Endrik'io pejy io tamin'ny 23 Janoary 2019 à 09:16
2 684 octets ajoutés , il y a 1 an
Endrik'io pejy io tamin'ny 23 Janoary 2019 à 08:26 (hanova)
(Pejy momba ny kristianisma sy ny Baiboly eto Madagasikara.)
Endrik'io pejy io tamin'ny 23 Janoary 2019 à 09:16 (hanova) (esory)
Ny Baiboly protestanta no azo lazaina hoe zokiny tamin'ny dikan-tenin'ny Baiboly amin'ny fiteny malagasy. Tamin'ny taona 1822 ny misionera dia efa afaka nanoratra ny fiteny malagasy merina tamin'ny fampiasana ny abidy latina. I David Jones (tonga tao Antananarivo tamin'ny 04 Oktobra 1820) sy i David Griffiths (tonga tao Antananarivo tamin'ny 15 Mey 1821), izay samy avy amin'ny ''[[London Missionary Society]]'' (LMS) no nanomboka nandika ny Baiboly tamin'ny teny malagasy. Nisy Malagasy nanampy azy ireo tamin'ny fandikan-teny. Tamin'ny 01 Janoary 1827 dia vita dika ny toko voalohany amin'ny [[Filazantsara araka an'i Lioka|Filazantsaran'i Lioka]]. Tamin'ny taona 1830 no vita tanteraka ny [[Testamenta Vaovao]] ary tamin'ny taona 1835 dia vita dika manontolo ny Baiboly. Vitan'i Baker sy Kitching fanontana printy ny Baiboly protestanta voalohany tamin'ny 21 Jona 1835.
Voarara ny fananana Baiboly sy ny fivavahana kristiana sady noroahina hody ny misionera tamin'ny andron'ny mpanjakavavy [[Ranavalona I]] (nanjaka teo anelanelan’ny taona 1828 sy 1861). Tamin'ny fitondran-d[[Radama II]] (nanjaka tao anelanelan’ny taona 1861 sy 1863) sy [[Rasoherina]] (nanjaka teo anelanelan’ny taona 1863 sy 1868) dia niverina nalalaka indray ny fivavahana kristiana sy famakiana Baiboly. Namoaka didy famerenana ny fahalalahan'ny fivavahana kristiana tanteraka ny mpanjakavavy [[Ranavalona II]] (nanjaka teo anelanelan'ny taona 1883 sy 1896), izay nandimby an-dRasoherina, ka nalalaka ny fananana sy ny famakiana ny Baiboly.
== Rohy ivelany ==
* Raha hamaky ny Baiboly protestanta amin'ny teny malagasy: http://www.baiboly.org:
== Lohatano sy fanamarihana ==
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/965253"